Shiinaha HuoXiangZheng Qi Wan soosaarayaasha iyo alaableyda | HEX
Waxay taageertaa caafimaadka habka difaaca jirka iyo nidaamka caloosha. Caawimaadda si loo yareeyo buuxnaanta caloosha.
Patchouli, Caleemaha Perilla, Angelica dahurica, Atractylodes macrocephala (walaaq-shiilay), diirka Tangerine, Pinellia (la sameeyay), Magnolia (oo sanjabiil laga sameeyay), Poria, Platycodon, licorice, caloosha dheriga, jujube, sinjibiil.
Badeecadani waa kiniin madow oo urursan; udgoon, macaan iyo xoogaa qadhaadh.
1. Cuntadu waa inay ahaataa mid fudud.
2. Laguguma talinayo inaad qaadato daawooyinka Shiinaha ee nafaqada leh inta daawadu socoto.
3. Bukaanka qaba cudurada halista ah ee daran sida dhiig karka, wadna xanuunka, cudurka beerka, sonkorowga, cudurada kalyaha, haweenka uurka leh ama bukaanada la daweynaya daaweyn kale waa inay ku qaataan iyadoo uu ku haayo dhaqtar.
4. Saddex maalmood ka dib qaadashada dawada, astaamuhu ma hagaagayaan, ama matag iyo shuban ayaa iska muuqda, astaamaha kale ee halista ahna waa inay aadaan cisbitaalka.
5. U qaado si waafaqsan isticmaalka iyo qiyaasta. Carruurta iyo waayeelka jir ahaan daciifka ah waa inay u qaataan iyadoo uu hagayo dhakhtar.
6. La tasho dhakhtar adeegsiga muddada-dheer.
7. Dadka xasaasiyadda ku leh sheygan waa inaysan u isticmaalin taxaddar.
8. Waa mamnuuc in la isticmaalo badeecadan markay sifooyinkeedu isbeddelaan.
9. Carruurta waa in loo adeegsadaa kormeerka dadka waaweyn.
10. Fadlan ka ilaali sheygan meel aysan carruurtu gaarin.
Hore: Liu Wei Di Huang Wan
Xiga: Gan Mao Ling (Kiniin daboolan filim)
White Willow Soo saar budada